ဆန္ဒ၊ စည်းကမ်းနှင့် လူနာစောင့် ~ The ICT.com.mm Blog
ဆန္ဒ၊ စည်းကမ်းနှင့် လူနာစောင့်
ဆေးရုံ၀င်းအတွင်းသို့ ခြေချလိုက်သည်နှင့် နောက်မှ ခေါ်သံကိုကြားလိုက်ရသည်။
“ဆရာ ခဏ၊ ဆရာ ခဏ”
ခေါ်သံကြားရာကို လှည့်ကြည့်မိတော့ မြင်တွေ့ရသည်က မိမိထံ အမောတကော ပြေးလာသူတစ်ဦး လူနာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်လိမ့်မည်။ နယ်မြို့ရှိ အရိုးခံ လူနာအများအပြားတွင် အနည်းငယ်လူတွင်ကျယ် လုပ်တတ်သောသူအချို့က ယခုကဲ့သို့ ဆေးရုံအ၀တွင် စာရေးသူကို မိတ်ဖွဲ့ မိတ်ဆက်ထားကြပြီး ward ထဲအရောက် လူအများရှေ့တွင်ကား မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်း ဆရာရင်းတပည့်ရင်းနှယ် ဟန်ပန်တို့ဖြင့် အခြားလူနာများရှေ့တွင် ကြွားဝါတတ်ကြသည် မဟုတ်လော။
အချို့သော ဆရာ၀န်ငယ်များကား ထို့သို့ဆိုလျှင် အားနာပါးနာနှင့်ရောယောင်ကာ ဟုတ်သယောင်ယောင်ဖြစ်ကာ အငိုက်မိတတ်ကြသလို အချို့ကား ထိုသူတို့ကို ထိုနေရာတွင်ပင် မသိကြောင်းပေါ်တင်ပြောတတ်သည်။ စာရေးသူက သူတို့ကဲ့သို့ မဟုတ်။
“ ဆရာ. အချိန်ရရင် စကားနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါ”
“အင်း… အချိန်ကတော့ မရဘူး။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးရင် လိုရင်းတိုရှင်းလောက်တော့ နားထောင်ပေးနိုင်ပါတယ်”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ၊ ကျွန်တော့သမီးလေး သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်လို့ ဆေးရုံတင်ထားပါတယ်၊ ညကသွေးလန့်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်နေချိန်မှာ သူနာပြု ဆရာမက ဧည့်ချိန်ကုန်ပြီဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကိုပြန်ခိုင်းတော့ သမီးရဲ့ သေရေးရှင်ရေး စိတ်ပူနေတဲ့ အဖေတစ်ယောက်ကို မစာမနာပြောရမလားကွဆိုပြီး ကျွန်တော်လည်း ပေါက်ကွဲပြီး သောင်းကျန်းခဲ့မိပါတယ်” သိလိုက်ပါပြီ။ ညက အဖြစ်အပျက်ကို တာ၀န်ကျ လက်ထောက်ဆရာ၀န်လေးက သတင်းပို့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စ ထိုအဖေကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး ဆေးရုံ၏ စည်းကမ်းကို သဘောပေါက်သည်အထိ ရှင်းပြရန်စိတ်ကူးပြီးသား။
“အော် ဟုတ်ပါပြီ ဒီလိုလုပ်ပါ ကျွန်တော်အခုတော့ Ward Round လိုက်ဦးမယ်။ ထမင်းပို့ချိန်နေ့လည် ၁၀ နာရီခွဲလောက် အဖေ ကျွန်တော့် အခန်းကို လာခဲ့ပါလေ၊ အဲဒီတော့မှ အေးအေးဆေးဆေး ပြောကြတာပေါ့”
“ ဆရာ့ိကို ဟိုလူကြီး ဘာတွေတိုင်နေတာလဲ၊ သိပ်မိုက်ရိုင်းတဲ့ လူ၊ တစ်လောကလုံး သူလခပေးထားတာ ကျနေတာပဲ” တာ၀န်ကျဆရာမလေး ဖြူသန္တာက ward ထဲ၀င်လာသူ မိမိကို ဆီးကြိုရင်းပြောသည်။ ထိုနေ့ညက တက်ထားသော လူနာများသဖြင့် ward around လိုက်သည်မှာ ဧည့်ချိန်ပင် ရောက်ခဲ့ချေပြီ။ ဆေရုံအ၀တွင် တွေ့ခဲ့သော ကလေးအဖေကိုလည်း မိမိအခန်းနားတွင် ရစ်သီရစ်သီ လုပ်နေသဖြင့် နောက်ဆုံး လူနာတစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီး အခန်းဆီသို့ သွားခဲ့သည်။
“လာပါ အဖေ၊ ၀င်ပါ”
အဖေဟု ခေါ်လိုက်သဖြင့် ကြားရသူတို့ အံ့သြသွားလိမ့်မည်။ စာရေးသူတို့ ကလေးဆရာ၀န် အများစုသည် ကလေးအဖေအရွယ် ယောင်္ကျားဆိုလျင် အဖေ၊ အမေဆိုလျင် အမေ၊ အဖိုးဆိုလျင် အဖိုး၊ အဖွားဆိုလျင် အဖွား၊ ကလေးခေါ်သကဲ့သို့ လိုက်ခေါ်တတ်ကြသည်။ OG များဆိုလျှင်တော့ တွေ့သမျှလူနာ အမျိုးသမီးဟူသမျှကို “သမီး” ဟု ခေါ်တတ်ကြသည် မဟုတ်လော။ စာရေးသူတို့အလုပ်သင် ဘ၀က အသက် (၈၀) အမေအို လူနာကြီးကို အသက်(၃၀) အရွယ် OG ကသမီးခေါ်မိသဖြင့် ပါမောက္ခကြီးမှ ရယ်သွမ်းသွေးရင်း သတိစကားပြောခဲ့ကြောင်းကိုလည်း အမှတ်ရမိပါသေးသည်။
“လာပါ နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ အကို၊ ထိုင်ပါ”
“၀င်းမောင်ပါ ဆရာ၊ တန်တရာ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်ပါ”
COUNSELLING ဟူသည့် ကျန်းမာရေး “နှစ်သိမ့် ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်း” ကို စတင်တော့မည် ဆိုလျှင် ဆွေးနွေးသူ ဆရာ၀န်နှင့် ဆွေးနွေးခံ လူနာရှင်တို့အကြား ရင်းနှီးမှုရမည့်အတိုင်းတာနှင့် ထိုလူနာရှင်တို့ဘက်က မည်မျှလောက် နား၀င်လက်ခံ နိုင်မည်ဆိုသည်ကို ချိန်ဆနိုင်ရန် ၎င်းတို့၏ ပညာအရည်အချင်း၊ အလုပ်အကိုင်တို့ကိုပါ ဦးစွာ စပ်စုရသည်။ စာရေးသူတို့ ဆရာ၀န် ဘ၀သည်ကား စာရေးတတ်ရုံ ဖတ်တတ်ရုံ လူနာများ သာမက ဘွဲ့ရ ပညာတတ်များကိုပါ တွေ့ဆုံကြရ ဆွေးနွေး အကြံပေးရခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။
“အခု ကလေး အခြေအနေက စိတ်ပူရသေးလား၊ အားမနာပါနဲ့ဆရာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပါ”
“ညတုန်းက အခြေအနေထက်စာရင်တော့ တိုးတတ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးဆိုတာ ကတော့ ဆေးရုံက ဆင်းရပြီ ဆိုမှ စိတ်ချရပြီ ပြောနိုင်တာ”
“အဲဒါ ဆရာရယ် ညတုန်းက ကလေးသေရေးရှင်ရေးဖြစ်နေချိန်မှာ ဆရာမ တွေက ကျွန်တော့်ကို ခွေးမောင်း ကျွဲမောင်း မောင်းထုတ်ကြတယ်”
“အဲ့ဒီ အတွက်တော့ ကျွန်တော်က ဆေးရုံ ကိုယ်စားတောင်းပန်ပါတယ်” “အဖေကလဲ သမီးဇောနဲ့ Restless ဖြစ်နေချိန်မှာ တာ၀န်ကျ ဆရာမ တွေကလည်း ဆေးရုံ စည်းကမ်း ကို တာ၀န် အရထမ်းဆောင် နေကြတာ၊ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦးနားလည်မှုတွေ လွဲတော့ ပြဿနာဖြစ်လာရတာပေါ့ အဖေရာ၊ ဆေးရုံတွေမှာက စည်းကမ်းတွေ ထုတ်လာရတယ်ဆိုတာလဲ လူနာတွေကြောင့်ပဲ အဖေရ”
“အဲ့ဒါတော့ ကျွန်တော် လက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စည်းကမ်းကို တန်ဖိုးထားတတ်သူ တစ်ယောက်ပါ”
“ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ လူဆိုတာလဲ အမျိုးမျိုး ရှိတာကိုး။ အဖေတို့လို သိတတ်တဲ့ လူထက် လစ်ရင်လစ်သလို စည်းကမ်းဖောက်တတ်တဲ့သူတွေကလည်း ပိုများနေတတော့ တာ၀န်ကျသူတွေက လူနာစောင့်မှန်သမျှ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ တင်းကြပ်ရတာပေါ့”
“ဒီကြားထဲ မသမာသူ အချောင်သမားတွေက အဲဒီလို အဖေတို့က ပြာ၊ ဆရာ၀န် ဆရာမတွေ အလုပ်ရှုပ် အာရုံမျးနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ အခွင့်ကောင်းယူပြီး ခိုးတာ၀ှက်တာ သူ့လူလိုလို ကိုယ့်လူလိုလို ဆေးရုံက လူလိုလိုနဲ့ လိမ်တာ ပတ်တာတွေလည်း ရှိသေးလို့ နှင်ရတာလည်းပါတယ်ဗျ”
“ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးက တစ်ယောက်ကို ဒီအခွင့်ရေးပေးရင် တစ်ယောက်က မရှုစိမ့်ဘူး၊ အခွင့်ရသူ ကလည်းရတာထက်ပိုတော့ ဘယ်လူနာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လောက်စိုးရိမ်ရ စိုးရိမ်ရ ဆေးရုံစည်းကမ်းကို ရှောင်ခွင့် မပေးဘူး။ ဥပမာ လူနာ နေရာ အခြေကျပြီးလို့ ဧည့်ချိန် အမျိုးသားတွေကို ထွက်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့”
“ပြီးတော့ မိန်းမ ယောင်္ကျား ပြဿနာ”
“ဆရာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ကျွန်တော့် နားမလည်ဘူး”
“အဖေတို့ကသာ ဆေးရုံကို မတတ်သာလို့ အရေးပေါ်တတ်လာရတာ၊ နောက် ၃.၄ ရက်နေလို့ သက်သာရင်လဲ အိမ်ပြန်ကြမှာ၊ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ နာတာရှည် လူနာတွေက ဆေးရုံမှာ လနဲ့ချီပြီး နေကြရတာ”
“အဲ့ဒီတော့ ဟိုဘက်လူနာစောင့်နဲ့ ဒီဘက်လူနာစောင့် ဇာတ်လမ်း၊ အပျိုနဲ့ အအို ဇာတ်လမ်း၊ တခုလတ်နဲ့ နှစ်ခုလတ် ဇာတ်လမ်း စတာတွေ ဖြစ်လာကြ၊ ပြဿနာ ဖြစ်ကြနဲ့”
“ဒါတွေဖြစ်တော့ ဆေးရုံလည်း မကောင်းဘူး”
“ပြီးတော့ ဆေးရုံတွေ ညစ်ပတ်တဲ့ ကိစ္စ”
“လူနာတွေကသာပြောတာ အဲဒီ ဆေးရုံက သိပ်ညစ်ပတ်တာနဲ့၊ အဲဒီလိုညစ်ပတ်အောင်ကလည်း ဆေးရုံကြီးနဲ့ ဆရာ၀န် ဆရာမ ၀န်ထမ်းတွေက လုပ်တာမဟုတ်ဘူး ။ ဆေးရုံလာတက်တဲ့ လူနာတွေကပဲ ညစ်ပေအောင်လုပ် သွားကြတာ။ ကိုယ်က တဒင်္ဂ တခဏနေရတုန်း ကိုယ် အဆင်ပြေရင်ပြီးရောနေတတ်တဲ့ သူတွေ၊ စည်းကမ်းမဲ့ကြလို့ ဖြစ်ရတော့ ဟိုနား သတိပေး ဆိုင်းဘုတ် ဒီနား သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်တွေ ထားရ ပြန်ရော၊ အဲ…. အဲဒါတောင် ကွမ်းမစားရဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို ကွမ်းတံတွေးနဲ့ ထွေးတဲ့ သူက ရှိလာပြန်တော့ ဒီလူတွေကို အဖေပြောသလို ကျွဲမောင်း နွားမောင်းသလို စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာအောင် သတိပေး လာရတာ၊ အားလုံးကသာ လေးလေးစားစား တာ၀န်သိသိနဲ့ ၀ိုင်း၀န်း ထိန်းသိမ်း လိုက်နာကြရင် ခုလိုမဖြစ်ဘူး’
“ဟော ဟော……. ပြောရင်းဆိုရင်းပဲ အဖေ တွေ့တယ်မလား အပေါ်ထပ်က ရေတွေသွန်ချတာ၊ ရေလဲဖြစ်နိုင်သလို၊ စားကြွင်းစားကျန်မက အညစ်အကြေးတွေပါ ဒီလို လွယ်လွယ်သွန်တော့ ဒီဆေးရုံ မညစ်ပတ်ဘဲ ခံနိုင်ရိုးလား”
“ဟော အောက်ထပ်က ဆရာမရဲ့ အော်သံကြားရပြီ”
“လူတွေက မိအေး အော်တာပဲ သိတာ၊ ဂဏန်းညှပ်တာ မသိဆိုသလိုဘဲ”
“မလွယ်ပါလား ဆရာရယ်၊ ဆရာရှင်းပြ တော့နားလည်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ဆန်စက်တစ်ခုကို အုပ်ချုပ်ရတာထက် ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူနာတွေဘက်ကလည်း အသိစိတ်တွေကောင်းဖို့ ကြိုးစားရမှာပါ”
“ဒါကလည်း ချမ်းသာတာ ဆင်းရဲတာ ပညာ တတ်တာ မတတ်တာနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ တမျိုးသားလုံးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အမျိုးသားရေး တစ်ရပ်အနေနဲ့ နီုင်ငံကြီးသားပီသဖို့ စည်းကမ်း ဖောက်တာကို ရှက်တတ်ဖို့အထိ ပညာပေးသွန်သင် ပြောင်းလဲပစ်ရမှာ”
“တကယ်တော့ လူနာရှင်တိုင်းဟာ ဆေးရုံ အတွက် ငွေကြေးလှူတာ မလှူတာတွေထက် ဆေးရုံနဲ့ ပတ်၀န်းကျင်ကို မိမိ အိမ်အလား တန်ဖိုးထားပြီး သန့်သန့် ရှင်းရှင်းနေရမယ်လို့ ခံယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်”
“ဒီနေ့တော့ သိပ်တန်ဖိုး ရှိသွားပြီ ဆရာ၊ ကျွန်တော်တို့ ကလည်း ကိုယ့် အတ္တနဲ့ ဆန္ဒကို ဦးစားပေးပြီး အဆိုးမြင်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ စည်းကမ်းလို့ ပြောလာတာကို ဆန့်ကျင် ဂျစ်ကန်ချင်ခဲ့ကြတာ”
“ခုတော့ ဆရာရှင်းပြလို့ သေသေချာချာ နားလည်လာ ရပြီ။ ကျွန်တော့်လိုပဲ နားမလည်သေးတဲ့လူတွေကို ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်။ ကျွန်တော် ကလည်း ပရဟိတအလုပ်တွေ ဝါသနာပါသူဆိုတော့ ဆရာပြောတဲ့ လူနာရှင်တွေရဲ့ ဆန္ဒနှင့် စည်းကမ်းဆိုတာလေးကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရခဲ့ရတာလေးတွေပါ ဖြည့်ပြီး ဆေးရုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး သန့်ရှင်းရေးတွေ တစ်တပ်တစ်အားကို ထိန်းသိမ်း ပါမယ်ဗျာ”
နေ့လည် ၁ နာရီ လဲထိုးပြီ။
“ကဲ နေ့လည် ထပ် Round ကြမယ်ဟေ့”
မောတော့ မောတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မမောဘူး ဟု ဆိုရမည်။
မိမိ ဟောခဲ့သောတရားသည် အောင်မြင်ခဲ့သည် မဟုတ်လော။
Newer ပြည်သူများ စာဖတ် အားနည်းမှု အကြောင်းတရား ရှာဖွေသင့်
Older iOS7Device တွေအတွက် Smartpen
One thought on “ဆန္ဒ၊ စည်းကမ်းနှင့် လူနာစောင့်”